बालबालिकाले भातको माड सजिलै पचाउन पनि सक्छन् र माडले शरीरलाई ऊर्जा पनि दिन्छ। यदि बच्चा अलि गिलो खानेकुरा खान तयार छ भन्ने लागेमा माड उपयुक्त खानेकुरा हो । माडसँगै अन्य नरम खानेकुराको सुरुवात गर्न सकिन्छ। भात पकाउँदा तयार हुने माड ऊर्जा र पोषणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
बच्चालाई किन भातको माड खान दिने ? यस्ता छन् फाइदा
Don't Miss it मह खाँदाको आश्चर्यजनक फाइदाहरु जानिराखाैँ
Up Next व्यवसायिक बेल खेति गर्ने हो कि ? स्वास्थ्यमा पनि यस्ता छन् फाइदाहरु